April 23, 2008, 1:25 pm Filed under: Articles ပြည်ပနိုင်ငံ အသီးသီးသို့ ရောက်ရှိနေကြသော မြန်မာများအား သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံအသီးသီးရှိ သံရုံးခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲများ ပေးလျှက်ရှိကြပါတယ်၊ အရှေ့ တောင်အာရှနိုင်ငံများဖြစ်တဲ့ ထိုင်း၊ မလေးရှား၊ စင်္ကာပူ၊ ဂျပန် အစရှိတဲ့နိုင်ငံများမှာ သက်ဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးများမှ မြန်မာများထံသို့ စာတိုက်မှ တဆင့် စာများလိုက်လံပေးပို့နေပြီး ဆန္ဒခံယူပွဲအတွက် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲများ ကောက်ခံလျက်ရှိပါတယ်။ စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင်လည်း လာမည့် ဧပြီလ ၂၅၊၂၆၊၂၇၊၂၈၊၂၉ ရက်များတွင် ဆန္ဒမဲများကို ကြိုတင်ကောက်ခံမည်လို့ သိရပါတယ်၊ ထိုသို့ဆန္ဒမဲကောက်ခံပွဲများမတိုင်မှီ စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူများမှ တက်ကြွစွာဖြင့် စည်းရုံးလှုပ်ရှားမှုများကို မိမိတို့ နီးစပ်ရာမှာ တနိုင်တပိုင် ပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာ့အရေးနိုးကြားတက်ကြွသူများမှ မြန်မာအလုပ်သမား အများစု စုဝေးနေထိုင်ကြရာWorker’s Dormitory များသို့ သွားရောက်ပြီး ကန့်ကွက်ဆန္ဒမဲပေးရေး လှုတ်ရှားမှုများကို ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါတယ်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာမှာ မြန်မာပြည်မှ စင်္ကာပူနိုင်ငံသို့် ရောက်ရှိနေကြပြီး အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသော မြန်မာအလုပ်သမားများအနေနှင့် ၄င်းတို့မသိရှိသေးသော အခြေခံဥပဒေမူကြမ်း၌ ပြဌာန်းထားပြီးဖြစ်သည့် အချက်အလက်များကို မေးမြန်းခြင်းများနှင့် စင်္ကာပူရှိ မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူများမှ ပြန်လည်ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်းများ၊ အသင့်ယူဆောင်လာသော စာရွက်စာတမ်းများကို လက်ဆင့်ကမ်းဖြန့်ဝေပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။
ထိုသို့မေးမြန်းခဲ့ရာမှာ –ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းကို စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာများ ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ရန် မြန်မာသံရုံး၌ ရယူနိုင်ပါသလား? ဟုဆိုသောမေးခွန်းကို့ ဦးမြင့်ထွန်းအား Ms. Anna မှတဆင့် မေးမြန်းပေးပြီး ယခုကဲ့သို့ ပြန်လည်ဖြေကြား ပေးလိုက်တယ်။
They only said you cannot copy the book.Someone can take Digital Camera or used handphone to take photo of all the pages.Just my thought.
April 23, 2008 @ 3:09 pm Reply	ခေါင်းစဉ်ကို မြင်လိုက်ရတော့ ငယ်ငယ်က ကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့ “ငွေဆယ်သိန်း၊ လူငါးယောက်နဲ့ နန်းကြော့ခိုင်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ပြေးသတိရတယ်…ခွိခွိ။
ဘဲအုပ်က တရာနှစ်ရာMs Anna က တပင်တည်း (ဆံပင်တပင်တည်းရှိသည့် ပုဏ္ဏားကြီးဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်)အဟောက်အဆူခံလို့အန်နာပျံ အံကိုခဲတယ်ဖုန်းကိုင်လျက်ဘဲ…..။
April 23, 2008 @ 3:29 pm Reply	Thank you all Burmese living in S’ pore who have decided to vote “NO”. Actually, maybe hiding from public means it is not worth your time.
April 23, 2008 @ 8:15 pm Reply	VOA and Myanmar Embassy Staff ( Ms.Anna) conversation..http://www.voanews.com/burmese/2008-04-21-advance-polls.cfm
April 24, 2008 @ 7:38 am Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI